Onyx - dhagax madow oo midab leh oo dahab ah u eg giraan leh - Onyx oo macnaheedu yahay - Fiidiyow
onika la yidhaahdo
Tags onika la yidhaahdo
Ka iibso onyx dabiici ah dukaankeena
Dhagaxa Onyx waa nooc faashad noocyadeeda kala duwan leh. Agate iyo onyx waa labada nooc ee chalcedony lab ah oo kala duwan oo kaliya noocyada xargaha: agate waxay leedahay xargaha garka leh iyo onyx waxay leeyihiin xargaha isku midka ah. Midabbada kooxeedyadu waxay u dhexeeyaan cadaan ilaa ku dhowaad midab kasta, keydi waxoogaa hooska ah, sida guduud ama buluug. Caadi ahaan, muunado muunad qaar ah oo midab onyx ah ayaa leh xargo madow iyo / ama caddaan ah.
Waxay ku timaadaa luqada Laatiinka, isla markasta oo laga soo xigto Giriigga macneheedu "cawl" ama "fingernail". Iyada oo midabkeedu yahay midabka midabka ah, midhooto ayaa la sheegi karaa inuu u eg yahay farir. Ereyga Ingiriisiga ah "ciddiyo" wuxuu caan ku yahay erayga Giriigga.
Dhagaxa onyx wuxuu ka sameysan yahay xarigyo chalcedony ah midabbo kala duwan. Waa cryptocrystalline, oo ka kooban isku dhafan fiican oo ka kooban macdanta silica iyo moganite. Xarigyadeeda ayaa is barbar socda midba midka kale, iyadoo ka soo horjeedda faashadda aadka u fowdada ah ee had iyo jeer ku dhaca isu soo baxyada.
Sardonyx waa nooc ka mid ah xayawaanka midabkiisu ay yihiin sardiyos, midab casaan, halkii madow. Waxa laga yaabaa in ay tahay noocyada ugu caansan, laakiin ma aha mid sida caadiga ah sida aaladda leh cantalya midabka leh. Daawooyinka dabiiciga ah ayaa loo isticmaalay taniyo wakhtiyadii hore si ay u soo saaraan midabka madow ee miraayad madow iyo casaanka iyo sirooshka sardoonkax. Kalluunka badankood ee suuqa waa mid caanno leh.
Qaadashada iyo daaweynta
Magaca ayaa sidoo kale loo isticmaalaa sidoo kale inuu ku calaamadiyo walxaha kale ee la isku qurxiyo, sida calcit ka sameysan Mexico, Hindiya, iyo meelo kale, oo inta badan la gooyey, laaluush iyo iibin. Qalabkani waa mid aad u jilicsan marka loo eego cilladda dhabta ah, iyo in badan oo si fudud loo heli karo. Inta badan alaabta la jajabiyey oo la iibiyay sida caleenta barafka ayaa ah walxaha karantiilka ah.
Noocyada sunta ah ee dabiiciga ah ayaa sidoo kale laga soo saarey cagaarshow caadi ah iyo da 'cad. Dabeecada dabiiciga ee qarnigii ugu horreeyay Pliny the Elder ayaa ku sharaxay farsamooyinkaas oo loo adeegsan jiray waqtiyada Roomaanka. Daawooyinka lagu soo saaro midabyo madow iyo midabyo kale ah waxaa ka mid ah qallajin ama karkariyo caanaha sonkorta, ka dibna daaweynaya sulfuric ama hydrochloric acid si aad u kariso sonkorta kaas oo lagu nuugay lakabyada sare ee dhagaxa. Farsamooyinkan ayaa wali la isticmaalaa, iyo sidoo kale daaweynta dheehidda kale, iyo inta badan waxa loogu yeero qalabka loo yaqaan 'black onyx' oo loo yaqaan 'artifishial'. Marka lagu daro daaweynta dheehada, kuleylka iyo daweynta nitric acid waxaa loo isticmaalay in la iftiimiyo ama la tirtiro midabo aan loo baahnayn.
Ciraaqiyiintii qadiimka ahaa waxay soo galeen dagaal iyaga oo qaadaya muraayadaha sardonyx oo la xardhay Mars, oo ah godka dagaalka. Tani waxaa la rumeeysan yahay in ay dhiirigeliso geesinimada dagaalka. Gobollada Renaissance Europe, xirashada sardonyx waxaa la rumaysan yahay in ay ku faanaan codkarka. Caqiidada Aasaasiga ah ee Aasiga ah waa in ay ka caawiso suuxdinta. Sardonyx waxaa si caadi ah loo adeegsaday umulisooyin Ingiriisi ah si loo yareeyo dhalmada iyada oo la gelinayo naasaha hooyada.